सावधान ! डरलाग्दो छ लुपस रोग, समयमै सतर्कता जरुरी | E-Highway News
रातोपुलस्थित नेशनल बाथरोग सेन्टरले नेपालमै पहिलोपटक लुपसका रोगीहरूको सर्वेक्षण सुरु गर्ने जनाएको छ । विश्व लुपस दिवसका अवसर सेन्टरद्वारा आयोजित ‘जनचेतना अभिवृद्धिका लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बाथरोग विशेषज्ञ डा. विनित वैद्यले नेपालमा लुपस रोगीको यकिन तथ्यांक पत्ता लगाउन सामुदायिक स्तरमै यसको सर्वेक्षण सुरु गर्न लागिएको बताएका छन् ।
लुपस रोग र यसका लक्षण ?
यो रोग अटोइम्युन डिजिज हो । शरीरको रोग निरोधक शक्तिले जब आˆनै शरीरको स्वस्थ कोषलाई असर गर्न थाल्छ त्यसबेला अटो इम्युन डिजिज सुरु हुने गर्छ । यो विशेषगरी युवा अवस्थामा तथा महिलाहरूमा सुरु भई लामो समय रहने गर्छ । यो रोग पुरुषको तुलनामा महिलाहरूमा नौ गुणा बढी हुने गर्छ । यो रोग लागेमा आजीवन औषधीको सेवन गर्नु पर्दछ ।
-यो रोग लागेमा विरामीहरूले घाममा जानु हुँदैन । जानै परेमा सन्सक्रिमको प्रयोग गर्ने, शरीर ढाक्ने कपडा लगाउनु पर्दछ ।
-सक्रिय जीवनका लागि नियमित व्यायाम गर्न जरुरी छ ।
-यो रोग लागेका विरामीलाई निमोनिया तथा फ्लू विरुद्धको खोप लगाउनु पर्दछ ।
-चिकित्सकको सल्लाह अनुसार समय समयमा जाँच गराउनु पर्दछ ।
-यो रोग लागेका महिलाहरूमा गर्भपतन हुने सम्भावना अधिक हुने भएकाले गर्भवती महिलाहरूलाई लुपस रोग नियन्त्रणमा आएको छ महिनापछि मात्र गर्भवती हुन सल्लाह दिइन्छ । साथै, एक पटक गर्भवती भइसकेपछि नियमित चेकजाँच गराउनुका साथै समय समयमा औषधीकेा सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
May 17 2018 04 : 13am । 127